DG oo aan dan ka lahayn dib u dhaca doorashada | KEYDMEDIA ONLINE
Khubarada u dhuunduleesha arrimaha siyaasadda Soomaliya, ayaa si weyn uga digaya in geeddi-socodka doorashadu uusan gaarin 2022 –ka, si looga baaqsado xasillooni darro hor leh iyo xasarado mar kale caasimada ka curta.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sida ku cad jadwalka doorashada dadban ee Soomaaliya, qorshuhu wuxuu ahaan in doorashada Madaxweynaha la qabto 10-kii Oktoobar 2021, [10 maalin ka hor], hayeeshee, taasi ma suura-galin, doorashooyinka Aqalka sare, ayaan wali dhammaystirnayn, halka midda Golaha shacabkana aan weli la bilaaban.
Geeddi-socodka doorasho oo daba dheeraaday, wuxuu durba keenay ‘daal doorasho’ kaas oo halis ku ah deggenaanshaha Muqdisho, maadaama jilayaasha siyaasadda ay ka niyad -jabeen xawaaraha liita ee xaafiiska Ra’iisul Wasaarha Soomaaliya ku wajahayo hirgalinta hannaanka doorashada.
Galmudug oo ka mid ah labada dowlad-goboleed ee aan weli soo dhameystirin doorashada kuraasta Aqalka sare, ayaan u muuqan mid doorasho u socta, maleeshiyaadka ASWJ ayaa horey u qabsaday dhul ballaaran waxayna qiyaastii 8-mayl u jiraan caasimadda Galmudug. Wasiirkii amniga ee maamulkaas ayaa iscasilay, wuxuuna nidaamka Qoorqoor u diyaar garoobay dagaal ka dhan ah Suufida Guriceel qabsatay.
Jubbaland, oo ahaa maamulkii ugu horreeyay ee iba-furay doorashada, waxaa ku dhiman 4 kursi oo Aqalka sare ah, hayeeshee, ugu danbeeyn berri ayay ballan qadeen in ay soo gabagabeynayaan, yeelkeede, abaaraha ku dhuftay Jubbooyinka iyo Gedo, waxay sababi karaan dib u dhac xooggan oo ku wajahan doorashada kuraasta Golaha shacabka.
Dowlad goboleedyada soo dhammaystiray doorashooyinka kuraasta Golaha Odayaasha, sida; (Hiirshabelle, Puntland iyo Koonfur -galbeed) kama muuqato wax la xariira u diyaar garow ku aaddan guda-galidda doorashada kuraasta Aqalka hoose.
Puntaland, waxa ay guda-gashay doorashooyinka degaan halka Koofurgalbeed ay waddo dhismaha golayaal degaan, labadaas maamul wax ahmiyad ah uma muujin doorashooyinka Golaha Shacabka, halka Madaxweynaha Hirshabeelle, uu xarun ka dhigtay Muqdisho, kadib markii uu soo gabagabeeyay doorashada Aqalka sare.
Dhawaan Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa shaaciyay in todobadka soo aaddan la gudagali doono doorashada kuraasta Golaha shacabka ay ku leeyihiin gobollada Waqooyi, [Soomaaliland].
Shacabka dan-yarta ah, ganacsatada heerarkeeda kala duwan iyo siyaasiyiinta, ayaa si weyn uga digaya geeddi-socodka doorashada oo sii daba dheeraada, dalka ayaana hadda ku jira hubanti la’aan siyaasadeed, waxaana taagan qanacsiga iyo nolosha guud ee bulshada.
Todobaadyadii la soo dhaafay, waxaa sare u kacay cabsida laga qabo in ciidamada xoogga dalka dib ugu soo laabtaan Muqdisho, kadib markii ay soo baxeen warar hoose oo sheegaya in Farmaajo qaar ka mid ah wakiillada Beesha Caalamka ka dalbaday in ay kala shaqeeyaan sidii uu gacantiisa ugu celin lahaa hoggaanka amniga iyo maamulka doorashada.
Formaajo, wuxuu si ula kac ah u abuuray qalalaaso siyaasadeed, si saaxiibbada caalamka iyo dhammaan daneeyayaasha kale ugu mashquulaan xasaradahaas siyaasadeed, halkii ay diiradda saari lahaayeen hannaanka doorashada.